Author Topic: Su'aal: Waa maxay finka kaso baxa dabada? Una eg kaso bax cml? (Read 4122 times)
« on: October 09, 2016, 01:37:57 PM »
Asc dhaman bahda somalidoctors sln kedip waxa dabada iiga soo baxay fin wayn oo ad moodo kaso bax aad ayuna ixanuunaya maka farisan karo mrka mxa sameya ? Ma dawo antibiotic aan qaata mise wan iska daayaa bal ila taliya
Re: Su'aal: Waa maxay finka kaso baxa dabada? Una eg kaso bax cml?
« Reply #1 on: October 22, 2016, 05:04:32 PM »
Hadduu yahay fin ka fog meesha saxarada ka soo baxdo wuxuu noqon karaa kasoobax caadi ah, waan in aad daawo qaadatid, haddii ay wasakh ku jirtane waa in laga soo saaro. Akhriso qoraal ku saabsan kasoobaxa: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=1163.0
Hadduu finka dhinac ku hayo meesha saxarada ka soo baxdo waxaa dhici karto in Fistula ay tahay, halkaan ka akhriso qoraal ku saabsan nabarkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?topic=5618.0
Views: 19603 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 19378 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 15486 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 3574 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 288 August 13, 2018, 05:43:48 PM